Imba - Hands Off!
Mauya pamusoro Maoko - mira kushungurudzwa kwevana
Takazvipira kudzivirira nekudzivirira kubva pamhirizhonga pabonde kuvana.
Isu tinofara nezve wese munhu anotitsigira uye anoda kuchengetedza vana nenzira yekudzivirira.
Nhoroondo yedu ine zvinyorwa zvinopfuura zviuru zvishanu zvakaongororwa mumapepanhau nezve mhirizhonga pabonde kuvana.
Batsira izvozvi nechikonzero chakanaka!
Chipo chega chega chinobatsira kusvika kuvanhu vazhinji nekubatsira vana vazhinji.
Vana nevakuru vanofanirwa kucherechedza zviratidzo zvekushungurudzwa pabonde pamwe neanenge achirara nevana, vane hutsinye uye vanoita zvepabonde nenzira yakakodzera. Tinoda kupa mupiro kune izvi kuburikidza nebasa redzidzo nekudzivirira.
Yakabudirira muna Ndira 2021
Vatsigiri vanotibatsira mazuva ese
Takazvipira kuchengetedzwa kwevana kwemakore akati wandei
Tiri kushanda pabhuku revana vane makore 3-7 kuti tivadzivirire kubva kumhirizhonga pabonde. Iri bhuku richaita kuti kudzivirira kuve nyore kuvana, vabereki, asiwo vadzidzisi nevanhu vese vanoshanda nevana zuva nezuva.
Sangano re "Hands Away - Stop Child Abuse" rinokurudzira kuti bhuku iri riwanikwe pachena kunzvimbo dzinochengeterwa vana, zvikoro nevabereki.
Kuti tisvike ma56 kindergartens uye nzvimbo dzekuchengetedza masikati kuGerman, 000 muSwitzerland uye zviuru gumi muAustria vane vana vanopfuura miriyoni, tinoda rutsigiro rwemari yemari yekudhinda nekuparadzira. Munyika dzinotaura chiGerman kune dzinenge zviuru makumi maviri nezvishanu zvepuraimari nezvikoro zvepuraimari zvine mazana matanhatu ezviuru zvevadzidzi mugiredhi rekutanga avo vanodawo kudzidziswa.
Pane yedu webhusaiti iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve kushamwaridzana kwedu pamwe nepo www.compire.com kutanga kuratidzwa kwebhuku chirongwa.
Ndinokutendai nerutsigiro rwenyu.
Bhodhi revatungamiriri veiyo Association, Baba uye Citizen,
Izvo hazvishande pasina iwe!
Zviri mumaoko ako!
95% yezvipo zvese inoenda yakananga kuvana
Chipo chako chekuchengetedza mwana
Mipiro yese inoenda yakanangana nekudzivirira mhirizhonga pabonde
Yakakwidzwa $ 15,000
Chinangwa $ 150,000
Kunyangwe nanhasi vanhu vazhinji vanotarisa kune imwe nzira kana zvasvika kune ino inotyisa uye nekudaro taboo musoro wenyaya.
Nebasa redu tinoda kupa kune chokwadi chekuti kwete vana chete asiwo vanhu vakuru vanokwanisa kuona zviratidzo zvekushungurudzwa pabonde pamwe nevanobata vana chibharo, vanoshungurudza uye vanoita zvepabonde munguva yakanaka uye vanoita nenzira kwayo. Ivo vanofanirwa kupihwa simba rekuti vataure nezvazvo (asi kwete nemutadzi iye, sezvo izvozvo zvaizomuyambira).
Izvo zvinofanirwa kuve pachena kuti vigilante ruramisiro haisi sarudzo. Zvakadaro, munhu wese anofanirwa kuziva kuti vanobatana kana kurangwa kana paine ruzivo rwekushungurudzwa, izvi asi kwete kuudzwa kumasimba ekuchengetedza vana kana kumapurisa wird.
IZVI ZVINOGONA KUTI PASI Pese PESI NEZVINONYANYA KUTI
Newebsite Hands Off isu tinoratidza kukura kwenyaya iyi mumatare ese kana guta kuGerman, Austria, Switzerland nepasirese.
Iyo firimu nhevedzano ”Kushanda shuga", Ndiine mutambi mukuru Nadja Uhl kana iyo firimu"Kuvhima bato"Miririra matambudziko acho zvakanaka. Zvinosuruvarisa, gurukota guru rezvemukati meGerman, Thomas de Maizière, ane magwaro"Saxon swamp”Inofanira kubviswa mumaraibhurari ese eARD enhau.
Iyi firimu yakaratidzwa na20: 15 pm mune yakatevera hurukuro yenhengo Sandra Maischberger inokurukurwa zvakadzama. Wilhelm Röhrig, UBSKM, akatotaura kuti anozivawo nezvekupondwa kwevana.
NUMERI, DATA, ZVOKWADI
BHILIYONI YEMAHARA BHUSI
Vanopfuura mamirioni matatu evana vari kugara mukutapwa (huwandu hwezviitiko zvisina kutaurwa zvinogona kunge zvakakwirira zvakanyanya, zvakadaro). Iyo indasitiri inobata nemifananidzo yekushungurudzwa kwevana nemavhidhiyo Madhora zviuru makumi matatu (iyo nhamba yematare asina kutumirwa anofanirawo kunge akanyanya kukwirira pano) inofanira kudirwa.
ZVINOITIKA KWETE KWESE - KWETE KUNE MUNzvimbo YANGU!
Vanhu vazhinji vachiri kutenda izvi. Asi nhamba idzi dzinotaura mutauro wakasiyana: Kushungurudzwa kwepabonde kwevana kuri pakati pedu. Chikamu chisingadiwe munharaunda yedu pachiyero chinoita kuti vataure uye vakatsamwa - uye chinofanira kutikurudzira kuti tiite.
MuGerman pane zviri pamutemo nezve 15,000 kushambadzira kwekushambadzira kwevana, zvakadaro, huwandu hwezviitiko zvisina kutaurwa hwanyanya zvakanyanya. WHO inofungidzira inoratidza kuti ndizvo vanenge miriyoni imwe vakanganisa vasikana nevakomana kuGerman, kana mumwe we Mamiriyoni 18 Vana nevechidiki muEurope.
Gara mukirasi yega yega yechikoro kuGerman 1-2 vanavanobatwa nekushungurudzwa pabonde.
About 9 kunze kwe10 makesi yekushungurudzwa kwevana inoramba isingaonekwe.
80-90% yevaipara mhosva vari murume, 10-20% Mukadzi.
MASANGANO ANODZIVIRIRA VANA
Kuti tiite izvi, tinoshanda pamwe nemasangano akadai se Munzwa.org, iyo yakavambwa pamwe naDemi Moore naAshton Kutcher kana iyo Kushanda Pasi pechitima Railroad Yedu naTim Ballard, iyo yakatosunungura vana vanopfuura chiuru nemazana matatu kubva muhusungwa nemamwe masangano anodzivirira vana kumba nekune dzimwe nyika.
Izvo zvakare kudiwa kwedu kuti mutemo wekukanganisa usimudzwe zvichidzoka shure. MUKADZI wese nemurume akasangana nekushungurudzwa achiri mudiki anofanirwa kuwana mukana wekumhan'arira waanomushungurudza.
Nyaya dzese dzemifananidzo yekushungurudzwa dzinofanirwa kumhan'arwa kuInterpol, iyo BKA kana zvimwe zviremera uye zvinoitiswa navo, izvo zvino zvave kuitirwa mune isingasviki gumi muzana yematambudziko. Kune izvi, iyo Mitemo yekuchengetedza data iri kuchinjwa nekukurumidza sezvinobvira, zvei zvematongerwo enyika zvinodaidzirwa. Izvi zvinoshandawo kumhedzisiro yemutemo. MuSwitzerland, faindi kana mitongo yakamiswa inogona kumisikidzwa kuve nemifananidzo yekushungurudzwa kwevana. MuGerman, anoba muzvitoro anogona kurangwa zvakaomarara kupfuura mubati zvisina kufanira.
MuPoland kumanikidzwa kwemakemikari kukandwa kwakaunzwa. Kunyangwe izvi zvichiratidzika sekunyanyisa, zvirinani pamusoro pe50% yevatadzi vese vanotambura kudzokazve. Pano zvakare, vezvematongerwo enyika vanokumbirwa kutora matanho akakodzera ekumanikidza panguva yekuvharirwa kana kurapwa kuitira kuti vapari vemhosva vagamuchire kutarisirwa kwepfungwa kwakakodzera. Iyo isingagumi nyaya inoda kumiswa ASAP!
Kudzivirira ndiko kumwe kunetseka kukuru. Isu tinotsigira kuratidzwa kwemitambo mumakireshi uye zvikoro zvinoratidza vana kuti miviri yavo ndeyavo chete.
Tiri kushanda kugadzira pasi rose "Amber Alert“Saka kuti, senge kuUS, nyaya dzese dzekuba dzinogona kumhan'arwa. Iyi ndiyo otomatiki alarm meseji uye siren alarm meseji iyo inoratidzwa mukati memaminetsi mashoma pane yega nhare mbozhanhare yevanhu vese vari mukati meimwe nharaunda yenzvimbo yekutapa. Izvi zvinoratidzika nehunhu hwemwana uye zvakare tsananguro uye ruzivo rweiye anoba (semuenzaniso rezinesi ndiro).
Nemagweta ane hunyanzvi nemasangano ataurwa pamusoro, isu tinobatsira kubatsira kuchengetedza vana vari panjodzi kubva kune vanoita zvakaipa. Uye zvakare, isu tinoshingairira kutsigira vapari vemhosva kuitira kuti vagamuchire chirango chavo chakakodzera uye avo vakaitirwa vatongwe.
95% yemipiro yako inoenda yakananga kudziviriro yevana!
UNOGONA KUPAI PANO